Omelette ne mbatatisi, zucchini uye chizi | Kicheni Mapepa
Mbatatisi, zucchini uye chizi omelette
Maria vazquez | 04/07/2021 10:00 | Vegetable Recipes, Nyore Mapepa
Chishanu chakafanana nedzimba dzetotilla, kunyanya panguva ino yegore. Inoperekedzwa nemadomasi saladi uye / kana imwe mhiripiri yakasvibirira, inova yakanakisa kudya kwemanheru, haubvumirani here? Uye kunyangwe iyo mbatatari omelette iriyo yatinofarira, ine zucchini mumwaka uzere, izvi mbatata omelette, zucchini uye chizi haridzivisiki.
Tortillas inotibvumidza kutamba nezvakawanda zvigadzirwa. Nekudaro, mwaka wega wega tinogona kugadzira dzakasiyana shanduro tichishandisa zvekudya zvemwaka senge, mune ino kesi, zucchini. Chikafu chakasiyana-siyana uye chatinga gadzirise nacho chikafu chinotapira - mumavhiki anotevera tichagadzira keke rekubvisa ngowani - pamwe nemunyu.
Neeiii kana isina hanyanisi? Gakava risingaperi. Ini ndinoda matillaira ane hanyanisi uye ndosaka ndawedzerawo kune iyi ine mbatatisi, zucchini uye chizi, asi avo vasina chinhu ichi vanogona kuita vasina icho. Chero nzira, iedze!
Iyi mbatatisi, zucchini uye chizi omelette chirongwa chakakura chemanheru chakaperekedzwa nemadomasi saladi kana yakabikwa green pepper.
Recipe mhando: Kutanga
Nguva yakazara: 25 M
1 svikiro mbatata
1 tranchete yechizi
Tinosvuura mbatatisi uye toicheka, nekudzvanya iyo, mune mashoma mashizha.
Tinocheka hanyanisi uye dhizai zucchini neganda.
Isu tinopisa mafuta akawanda musadhi uye isu tinokanga mbatatisi, hanyanisi uye zukini yakarungwa pamusoro pemhepo iri pakati, kusvikira mbatatisi iri nyoro uye yotanga kutyora.
Ipapo tinotora mbatatisi, hanyanisi uye zucchini kunze kwepani, kuvanyudza zvakanaka uye kuvachengeta gare gare mundiro huru.
Pashure tinorova mazai mune imwe mudziyo, uchivawedzera mundiro yematezi uye nekusanganisa mushe.
Mukapu umo maticha gadzira tortilla, pisa teaspoon yemafuta uye tidururire musanganiswa pamwe chete nechizi tranchete. Kwemaminetsi akati wandei isu tinosanganisa ne spatula sekunge taizogadzirira kukakavara. Gare gare, tinorega zviitwe kune rimwe divi uye tinoitendeudza kuti tiibike kwemamwe maminetsi mashoma.
Isu tinoshumira mbatata omelette. zucchini uye chizi kunakidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Mbatatisi, zucchini uye chizi omelette
Lemon keke isina hovhoni
Couscous nehuku uye broccoli